Ogaden News Agency (ONA) – Shir Baladhan oo ay isugu timid Jaliyaga Ogadenya ee Gobolka Minnesota
Shir Baladhan oo ay isugu timid Jaliyaga Ogadenya ee Gobolka Minnesota
Posted by ONA Admin	/ April 7, 2014
Waxaa manta lagu qabtay xarunta jaaliyada (Ogaden American Community Center) ee gobalka Minnesota shirlagu qaadaadhigay hawlaha guud ee Jaaliyada Minnesota. Shirkan ayay isgu yimaadeen xubno aad iyo aad utiro badan oo kakalayimid dhamaan dagmooyinka magaalada Minnesota sida, Faribault, Rochester, St. loud, Willmar, iyo twincities ka. Shirkan oo maamulka Jaaliyadu sifiican usoo diyaariyeen ayaa udhacay sidiilarabay iyadoo runtii dhamaan xubnuhu aad ugu diirsadeen sida shirka loosoo abaabulay iyo habsami usocodkii shirka.
Shirka jaaliyada ayaa lagu bilaabay aayadaha Qur’an ka Kariimaka ah iyo wacdidheer oo kahadlaya xaqnimada halganka iyo duruufaha kuxeeran. Iyo caalamadaha munaafiqiinta iyo sidii loogadigtoonaanlahaa. Kaas oo uusoo jeediayay hogaanka arimaha diinta Cabdifataax Xassan Carab.
Intaa kadib, waxaa lagu soodhaweeyay gudoomiyaha Jaaliyada gobalka Minnesota Cabdinasir Xirsi (Gaani) sigoo kasoo jeediyay khudbad dheer oo taabanaysa dhinacyobadan cadeeyayna heerka uumarayo gumaysigu oo ah gabagabo iyo sida ay ufulayaan qorshayaashii loodajiyay halganka hoos illa kor. Gudoomiyaha Jaaliyada ayaa aad ugala dardaarmay xubnaha inay ilaaliyaan sharciga iyo waajibaadka qaranku kuleeyahay islamarkaana ayna kukadsoomin dabinada, shirqoolada iyo dacaayadaha beenta ah ee uu adeegsanayo gumaysigan wakhtigiisii dhamaaday. Isagoo halkudhag oogadhigay (pratikadaa ka adag beenta). Wax udhaxeeyana majiraan gumaysi iyo gobanimo doon. Guushana waxaa iskale gobanimadoonka.
Gudoomiyaha Jaaliyada kadib, waxaa kuxigay warbixin guud oo haayada cilmibaaristu ka qabtirtay xubnxhx heerka iyo xaalada guud ee halganku maraayo. Warbixinta ayaa waxaa kamid ahaa sida halganka Ogadenia uuna ugaduwanayn halgamadii faraha badnaa ee wadamo badani mareen markii ay xornimadoodii uhalgamayeen sida Algeria, Vietnam, South Africa, iyo Korea. Iyo inuuna shacabku kukadsoomin wadadan dheer ee Talyaanigu dhasay 1934 kii ee hada uun laamiga loomariyay iyo guryaha ay qurbajoogtu Jigjiga kadhisatay. Hoogaanka ayaa waxuu aad ugu dheeraaday arimaha siyaasada amniga iyo waliba heerka aymarayso wadahaladii lookala dabqaadahayay ee udhaxeeyay JWXO iyo Gumaysiga Ethiopia.
Waxaa sidookale hogaanka arimaha bulshada ahaana xidhiidhiyaha shirka Farxaan Ahmed ayaan isuguna hadalo kooban oo murtile usoojeediyay xubnahana siadag ula dardaarmay.
Kadibna waxaa microphone ka lagu soodhaweeyay qaarkamid ah maamulka OYSU ee gobalka Minnesota oo aykamidyihiin Mudane Cabdifataax Kaariye iyo Mudane Cabdinaasir iyagoo soobandhigay action planka ee sanadkan 2014.
Intaa kadib waxaa lagu wareejiyay microphone ka xubnaha kuwaas oo soojeediyay talooyin waxku ool ah. Oo kusaabsan hor usocodka halganka ee ay hormuudka utahay Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia (JWXO). Waxaana lagu soo gabagabeeyay duco, farxad iyo inlalaban laabo halganka.